Ciidamada Booliska Somaliland Oo Dad U Xidh Xidhay Qarax Bambo Gacmeed Ka Dhacay Magaalada Laascanood.
Wednesday January 13, 2021 - 19:33:02 in Wararka by Super Admin
Laascaanood(Xogreebnews)-Ciidammada Booliska Somaliland ayaa howlgallo xalay ka sameeyeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxay ku soo qabtay dhowr qof oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay magaalada.
Qaraxan oo ahaa Bam gacmeed ayaa lagu weeraray goob ay ka socotay diiwaan gelinta cod bixiyeyaasha Somaliland.
Illaa saddex qof oo laba askari ah iyo qof shacab ah ayaa ku dhaawacmay qaraxa bambaano ee lagu weeraray xarunta lagu diiwaan gelinayay cod bixiyeyaasha.
Ciidammada Booliska Somaliland ayaa howlgallo tan iyo xalay ka sameeyeen xaafadaha Laascaanood ayaa waxay soo qabteen dad lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen qaraxaas.
Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool ayaa amnigeeda soo hagaagaya sannadihii u dambeeyay, waxaana magaaladaas hore uga dhacay dilal.